‘डिपोर्टका लागि निशानामा रहेका नेपाली अमेरिकामा ठूलो संख्यामा’ – रमेश श्रेष्ठ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
‘डिपोर्टका लागि निशानामा रहेका नेपाली अमेरिकामा ठूलो संख्यामा’ – रमेश श्रेष्ठ
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १२, २०७३ बिहीबार
-रमेश श्रेष्ठ, कानुन व्यवसायी
आइसले विभिन्न स्थानमा छापा मारेर सयौंलाई नियन्त्रणमा लिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले वास्तवममा एकखालको आतंकको अवस्था छ । हामीले अध्यागमनको विषयमा कानुनी अभ्यास गरेको आधारमा नेपाली वा अरु आप्रवासीले त्रसित बन्दै फोन गर्न थालेका छन् । विभिन्न स्थानमा कागजपत्रविहिनहरु पक्राउ गरेका घटनापछि स्थीति उग्र नै बनेको छ । अब के होला भन्ने त्रासका साथ जिज्ञासाहरु आउने गरेका छन् । ग्रिनकार्ड प्राप्त भइसकेकाहरु पनि त्रसित छन् ।
इमिग्रेशनको छापमा कुनै नेपाली परेको खबर छ ?
प्रत्यक्ष रुपमा परेको व्यक्तिसँग कुरा भएको छैन । तर केही नेपालीहरु परेका खबर आएका छन् । न्युयोर्कको लङ आइल्याण्डमा इमिग्रेशनको छापमा एकजना नेपाली समातिएको सुचना आएको छ । स्टोरमा काम गरिरहेका नेपालीलाई आइसले नियन्त्रणमा लिएको एकजनाले जानकारी दिएका थिए । भारतीय स्टोरमा आएर अध्यागमनका अधिकारीहरुले छापा मार्दा उनी समातिएको र उनलाई सात आठ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएको सुचना आएको थियो । तर उनीसँग वर्क परमिट, आईडी र अहिलेपनि अमेरिकामा बस्ने इजाजत भएको पाइएपछि छाडिएको खबर आएको छ । मेरो जानकारीमा आए अनुशार उनी टीपीएसप्राप्त व्यक्ति भएकाले र टीपीएसबाट वर्क परमिट प्राप्त गरेकाले डिपोर्ट हुनबाट बचेका हुनसक्छन् ।
इमिग्रेशन एजेण्ट छापामार्न आएमा के गर्ने ?
आइसले अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि वारेन्ट लिएर आउनसक्छन् । तर अध्यागमनका विषयमा गैरकानुनी रुपमा बसिरहेकाहरुका बारेमा सुचना पाएमा कुनै अदालतको कागजात वा वारेन्ट बोकेर आउछन् जस्तो लाग्दैन । उनीहरुले कागजपत्रविहिन भएको सुचना प्राप्त गरेमा जहाँ पनि सोधपुछ गर्न सक्छन् । कसैलाई खोज्न आउँदा अरु व्यक्ति पनि देखेमा इमिग्रेशन एजेण्टले उनीहरुका बारेमा पनि सोधपुछ गर्न सक्छ । एउटा व्यक्तिलाई खोज्न जाँदा कागजपत्रविहिन अरु देखिएमा उनीहरु सबैलाई सोध्न सक्छन् । उचित कागजात प्रस्तुत गर्न नसकेमा, कानुनी हैसियत देखाउन नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छन् र लिने गरेका छन् ।
इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टको एजेण्ट आएमा यदि तपाईको केस अदालतमा चलिरहेको छ वा युएससीआईएसमा आवेदन दिनुभएको छ भने त्यसको कागजात देखाउनुपर्छ । आफू कानुनी रुपमा बसिरहेको प्रमाणित गर्ने कागजात सधै आफ्नो साथमा राख्नुपर्छ । गाडी चलाउँदा वा डेलिभरीमा जाँदा लाइसेन्स वा आईडीमात्र राखेर हुँदैन, इमिग्रेशन सम्बन्धि कागजातपनि साथै बोकेर हिड्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्ता कागजात आफ्नो साथमा राखेर अधिकारीलाई व्याख्या गर्न सकेमा समस्या हुँदैन ।
दुईचार घण्टालाई नियन्त्रणमा लिएपनि आत्तिहाल्नु हुँदैन । आफ्ना कागजात देखाएर छुट्न सकिन्छ । तर डिपोर्टको अर्डर पाइसकेरपनि विना कुनै कागजात अमेरिकामा लुकेर बसेको छ भने उसले आफू डिपोर्ट हुनबाट बच्नका लागि केही गर्न सक्दैन ।
त्यस्तो नेपालीहरु कत्तिको छन् अमेरिकामा ?
देशनिकालाको आदेश पाइसकेका तर अमेरिकामा नै रहेका नेपालीहरु अमेरिकामा थुप्रै छन् । तर डिपोर्टको अन्तिम आदेश भइसकेको व्यक्ति अमेरिकामा लुकेर बसेका छन् भने उनीहरु निशानामा पर्छन् । नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई टीपीएस प्रदान गरिएकाले कतिपय त्यस्ता नेपालीहरु टीपीएसको संरक्षणमा पनि छन् ।
टीपीएस नलिएका तर अदालतमा मुद्दा हारेर डिपोर्टको आदेश पाएका नेपालीहरु अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । अदालतमा केस चलिरहेको बेलामा टीपीएसका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । तर कतिपयले अदालतमा रहेको केसमा असर पर्न सक्ने शंका गरेर टीपीएसका लागि आवेदन दिएनन् । उनीहरुका लागि डिपोर्टको अन्तिम आदेश आइसकेको सन्दर्भमा अब मुस्किल हुन्छ । तर कोही व्यक्ति प्रारम्भिक रुपमा अदालतबाट मुद्दा हारेको छ तर अपिल गरिरहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टले नियन्त्रणमा लिएर डिपोर्ट गर्न मिल्दैन ।
आइसका एजेण्टहरुमा घरमा आएर कागजातको खोजी गर्दा आफूले अपिल गरेको कागजात देखाएमा एजेण्टहरुले जाँचबुझ गर्छन् । यदि केस चलिरहेको देखिएमा देशनिकालामा परिदैन ।
अपराध गरेको व्यक्तिलाई डिपोर्टको प्राथमिकतामा राखिएको छ । कस्ता कस्ता अपराध पर्छन् ?
आक्रमण, घातक वा जघन्य अपराध नभएपनि त्यस्ता व्यक्तिलाई निशानामा पार्ने गरिएको छ । सामान्य चोरीका घटनालाई पनि आपराधिक गतिविधिमा राखेर अध्यागमन एजेण्टले पक्राउ गरेर डिपोर्ट गर्नसक्छन् । कम उमेरको व्यक्तिलाई चुरोट वा मादक पदार्थ बेच्ने, बिना लाइसेन्स मसाज वा नेल्समा काम गर्ने जस्ता कुराहरु पनि अपराधमा नै पर्छन् । विना लाइसेन्स ब्युटिसियनका रुपमा काम गरेमा पनि पक्राउ गरेर अध्यमगन समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावना छ । अहिलेको वातारण हेर्दा सानो र ठूलो अपराध छुट्याउने अवस्था छैन । ओबामा कार्यकालमा पनि सानो सानो अपराधमा नियन्त्रणमा लिएर डिपोर्ट गर्ने घटनाहरु भएका थिए । अहिलेको सरकारले अत्यन्तै कडा रवैया अपनाएकाले सानोतिनो अपराधका कारण पनि देशनिकालामा पर्ने खतरा रहन्छ ।
इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टले अपरेशन क्रस चेक संचालन गरिरहेको छ । कुनै व्यक्तिले अदालतबाट देशनिकालाको फैसला पाइसकेपछि उसलाई डिपोर्टको लागि बोलाइन्छ । त्यो अवस्थामा ब्यागेज सहित आउने भनेर पत्र पठाइन्थ्यो । पहिले ब्याग एण्ड ब्यागेजको पत्र नआउँदासम्म डिपोर्ट गर्न नपाइने तर्क थियो । तर त्यस्तो तर्क अदालतले अब अस्वीकार गरेको छ । कुनै व्यक्तिको मुद्दा सकिएर डिपोर्टको आदेश पाइसकेको सन्दर्भमा त्यस्तो आदेश पाएर पनि लुकेर बसेकाहरु आइसको प्राथमिकतामा परिरहेका छन् । अपरेशन क्रस चेक अन्तरगत उनीहरुलाई प्राथमिकतामा पारिएको छ । देशनिकालाको आदेश पाएपनि अध्यागमनले त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । तर अब त्यस्तो आदेश पाएकाहरुलाई देशनिकालाको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।